DDSI Oo Kaalmo Deg-deg ah Ugo’aamisay 5,000 Oo Kasoo Barakacday Deegaanka Axmaarada - Cakaara News
DDSI Oo Kaalmo Deg-deg ah Ugo’aamisay 5,000 Oo Kasoo Barakacday Deegaanka Axmaarada
Dhagaxbuur(Cakaaranews) Isniin, 5ta September 2016. Sida lawada ogsoonyahay dalka itoobiya waxaa kasoo talin jiray maamulo boqortooyo kudhisan oo ay ugudanbeeyeen shuucigii dhargigu. Kuwaas oo shacabwaynaha dalka cabudhin iyo cadaadis ba’an kuhayn jiray. Waxaana hubaal ah in halgankii khadhaadhaa ee ay galeen ururka TPLF oo uu garab socday halgankii ururka axmaarada ee ANDMO uu dhalay EPRDF islamarkaana uu horseeday xuquuqaha sinaanta, dimoqraadiyada iyo cadaalada. Kaasoo lagu hantay dastuurka maanta aan haysano oo ah midka dhigaya in qawmiyad waliba afkeeda, diinteeda iyo dhaqankeeda iskumaamusho. Taasoo keentay in itoobiya ay maanta kajiraan deegaano ay qawmiyad waliba iskeed isu maamusho oo hoos yimaada dawlad federal ah oo loo siman yahay. Waana takeentay horumar laxaad leh iyo koboc dhaqaale oo uu wadanku kuhigsanayo inuu kaga mid noqdo wadamada uu dhaqaalahoodu dhex-dhexaadka yahay. Sida uu caalamkuba kamarakacay.
Balse, waxaa jira dadkii dhargiga ee aragtida xumaa oo aysan marnaba ucuntamin halgankii lagu keenay nidaamka federalismka oo raba inay soo celiyaan nidaamkii dhargiga ee kiniisada looga talin jiray. Waxaana tusaale cad usoo qaadan karaa rabshadahan sharci darada ah ee ay kadanbayso dawlada shacbiya oo adeegsanaysa Onag iyo ginboot7.
Hadaba, calooshood ushaqaystayaashan rabshad oogayaasha ah ee ay kadanbayso shacbiya ayaa si ay ugu hirgasho inay meesha kasaaraan nidaamka federalismka ah waxaay bar-tilmaameedsadeen shacabka Tigray oo udub-dhexaad u ahaa federalismka iyagoo uga dan leh inay soo celiyaan cabudhiskii iyo cadaadiskii hore ee dhiig-miiratada.
Waxaana xaqiiqa ah in nidaamka federalismka ah ee wakhtigan xaadirka ah kahirgalay dalka itoobiya aysan jirin qawmiyad maamusha qawmiyad kale oo caydhiinka wax walba lagu qaybsaday. Tusaale ahaan shaqsi qawmiyad kale kasoo jeeda oo qawmiyad kale maamula habayaraatee majiro. Iyadoo ay sidaa tahay, ayaa waxay calooshood ushaqaystayaashani ku eedaynayaan qawmiyada Tigray inay jirto awood sare oo tigray. Taasoo ah xaqiraad cad oo been iyo barobagando lamaluuqay ah oo lagu weerarayo federalismka itoobiya iyadoo in kabadan 70kun oo kamid ah qawmiyada tigray ay kunafwayday halgankii khadhaadhaa e dhargiga islamarkaana 30kun oo laxaadkoodii kuwayday ay maanta joogaan.
Hadaba, xubnahan nabadiidka ah ee ay shacbiya dabada kawado oo jooga dalka iyo dibadaba waxay kamidaysan yihiin far kufiiqa qawmiyada tigray iyagoo been abuur kasheegaya islamarkaana kutilmaamaya inay jirto nidaam ay qawmiyadaasi kaga sarayso qawmiyadaha kale. Taasoo ah mid aan sal iyo raad toona lahayn.
Sida lawada ogsoonyahayna, hay’adaha nabadgelyada ee dalka sida wasaarada gaashaandhiga, ciidamada difaaca qaranka iyo securityguba waxay 20kii sano ee lasoo dhaafay wadanka kahirgaliyeen amni buuxa iyagoo kadib markay meel saareen nabadgelyada dalka ay ilaa hada caawinayaan wadamada ay nabadgelyadaradu kajirto ee caalamka. Waxaana tusaale kaaga filan amaantii madaxwaynaha maraykanku uu usoo jeediyay ciidamada difaaca qaranka itoobiya oo uu ku amaanay sugida nabadgelyada dalka iyo caalamkaba iyadoo ay gaar ahaan hay’ada securityga JDFI ku amaanan tahay awooda, firfircoonida iyo kartida ay ku ogaadaan islamarkaana kaga hortagaan falalka lasoo maleego inta aanay wali dhicin. Waana mid shacabka dalku u ogyahay waxqabadkooda. Waxaana tusaale u ah dhacdadii udanbaysay oo saraakiil badani ay naftooda kuwaayeen.
Hadaba hadaan soo qaadano dhacdooyinkii ugu danbeeyay ee kadhacay deegaanada axmaarada iyo oromada, waxaa si toos ah isusoo abaabulay naftanyaagii iyo timkatanyaagii aaminsanaa islawaynida axmuqnimada ah ee gabalkeedu dhacay iyo doqonimada xambaarsan axmuqnimada kuwaasoo raba inay nidaamka federalismka ah meesha kasaaraan.
Iskusoo wada duuboo, dhamaan qawmiyadaha itoobiya waa qawmiyado sharaf iyo ixtiraam mudan oo shaqsi xuna yeelan kara balse waxay qawmiyad kasta kamarakici geesinimadii, kartidii iyo ficilkii ay qawmiyada tigray heeryadii gumaysiga dhargiga kaga dulqaadeen shacab-waynaha dalka.
Waxaana xusid mudan in dhamaan horumarka aas-aasiga ah iyo kan kaabayaasha dhaqaaluhu ay kuyimaadeen halgankii iyo kartidii ay muujiyeen shacabka tigray oo ay waliba sabab u yihiin isbadalka maanta dalka kajira.
Si kastaba ha ahaatee, shir uu maanta kabineega deegaanku fadhiistay ayaa waxay kucanbaareeyeen beenta iyo barobagandada xaqiiqada kafog oo si meesha looga saaro nidaamka federalismka ah lagu beegsanayo qawmiyad. Waxayna carabka kudhufteen in ujeedada kadanbaysa ay tahay in nidaamka federalismka ah meesha laga saaro. Sidaadarteed, cid waliba sidaa ha ula socoto, hana ogaato in cid laga yeelayaa aysan habayaraatee jirin.
Kabineega deegaanka oo arintaa si wayn uga xumaaday islamarkaana canbaareeyay fikirka kadanbeeya in si axmuqnimo leh dadka loo soo barakiciyo ayaa go’aamiyay 10milyan oo deeq loogu talagalay in hoy dadkaa loogu sameeyo.
Dhanka kale, ganacsatada iyo maal-qabeenada deegaanka oo kacadhooday ficilka foosha xun ee lagula kacay shacabka tigray ee deganaa gonder oo la isugu daray hantidii oo laga boobo, dil iyo dhac ayaa kuhawlan sidii ay ucaawin lahaayeen dadka walaalahood ah ee lasoo barakiciyay.
Sidoo kale, kabineega ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay falalka foosha xun ee ay onag kagaysatay deegaanka oromiya ee ay naf iyo maalba kuhaligeen iyo waliba dhibaatada ay ginboot7 gaadhsiisay dadka axmaarada ah ee degan bahardar.
Ugudanbayna, kabineega ayaa sheegay in dastuurka dalka iyo nidaamka federalismka ah ee iyehadhig hormuudka utahay uu yahay wadada kali ah ee ay itoobiya, itoobiya kusii ahaan karto ama kusii jiri karto isagoo kabineegu hoosta kaxariiqay islamarkaana digniin culus udiray cid kasta oo iskudayda inay meel kaga dhacdo sharafta, dastuurka iyo sumcada dalka.
Waxayna XDSHSI, xukuumada DDSI iyo shacabkuba sheegeen inay sii wadi doonaan taageerida nidaamka federalismka ah ee ay hogaaminayso EPRDF iyo lahalganka cidii waxyeelo ku ah nidaamka. Sidoo kale, waxay shaaca kaqaadeen inay garab taagan yihiin shacabka tigray.